သူမရဲ့လက်ရှိအချစ်ရေးအခြေအနေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီးပရိတ်သတ်တွေကို ချပြလာခဲ့တဲ့ L ဆိုင်းဇီ – Cele Snap
အသံစူးစူးလေးနဲ့ အသည်းကွဲသီချင်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ရေးသားပြီး သီဆိုတိုင်း လူကြီး လူငယ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားအောင်မြင်မှုတွေကို ခုချိန်ထိ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သူလေးကတော့ အဆိုတော် L ဆိုင်းဇီ ပဲဖြစ်ပါ တယ်နော်. ..
သူမကတော့ အနုပညာလောကကနေခဏတာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပေမဲ့ သူမရဲ့ သီချင်းတွေကတော့ ပြည်သူပရိသတ်တွေကြားထဲမှာ အောင်မြင်နေဆဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. သူမကတော့ အသည်းကွဲသီချင်းတွေကို ခံစားချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုတတ်လေ့ရှိပေမဲ့ သူမရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ ပက်သက်တဲ့ ခံစားချက်တွေကိုတော့ ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလေ့မရှိပေမဲ့ ဒီနေ့လေးမှာတော့ သူမက လက်ရှိအချစ်ရေးကို ရေးသားလာခဲ့ပါ တယ်နော်…
လွမ်းတယ် ကိုကို ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပုံလေးတစ်ပုံကို တင်လာခဲ့တာကြောင့်လည်း သူမကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ မေးခွန်းတွေများစွာကို မေးလာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်… L ဆိုင်းဇီ ကိုချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း L ဆိုင်းဇီ ရဲ့ချစ်သူ က ဘယ်သူဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာလည်း ခန့်မှန်းပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်…
အသံစူးစူးလေးနဲ့ အသညျးကှဲသီခငျြးတှကေို ကိုယျတိုငျရေးသားပွီး သီဆို တိုငျး လူကွီး လူငယျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားအောငျမွငျမှုတှကေို ခုခြိနျထိ ထိနျးသိမျးထားနိုငျသူလေးကတော့ အဆိုတျော L ဆိုငျးဇီ ပဲဖွဈပါတယျနျော. ..
သူမကတော့ အနုပညာလောကကနခေဏတာပြောကျကှယျသှားခဲ့ပမေဲ့ သူမရဲ့ သီခငျြးတှကေတော့ ပွညျသူပရိသတျတှကွေားထဲမှာ အောငျမွငျနဆေဲပဲ ဖွဈပါတယျနျော.. သူမကတော့ အသညျးကှဲသီခငျြးတှကေို ခံစားခကျြကောငျးကောငျးနဲ့ သီဆိုတတျလရှေိ့ပမေဲ့ သူမရဲ့အခဈြရေးနဲ့ ပကျသကျတဲ့ ခံစားခကျြတှကေိုတော့ ပရိသတျတှကေို အသိပေးလမေ့ရှိပမေဲ့ ဒီနလေ့ေးမှာတော့ သူမက လကျရှိအခဈြရေးကို ရေးသားလာခဲ့ပါ တယျနျော…
လှမျးတယျ ကိုကို ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့အတူ ပုံလေးတဈပုံကို တငျလာခဲ့တာကွောငျ့လညျး သူမကို ခဈြကွတဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ မေးခှနျးတှမြေားစှာကို မေးလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျနျော… L ဆိုငျးဇီ ကိုခဈြကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး L ဆိုငျးဇီ ရဲ့ခဈြသူက ဘယျသူဖွဈနိုငျလဲဆိုတာလညျး ခနျ့မှနျးပေးခဲ့ကွ ပါအုံးနျော…